Home News Muqtaar Maxamed cali oo ka digay in dhul dan guud ah shaqsiyaad...
Muqtaar Maxamed cali oo ka digay in dhul dan guud ah shaqsiyaad gaar ah dowladu u saxiixdo
Siyaasi muqtaar maxamed cali ayaa ka digay in dowladda soomaaliya ay bixiso dhulalka dadweynaha maadama dhulalkaasi uu ka dhaxeeyo shacbiga soomaaliyeed.
Dowlada federaalka soomaaliya ayaa la aaminsanyahay in tahay dowladdii ugu liidatay maadama ay ku kacday intey jirto falal argagax geliyay shacabka soomaaliyeed.
Siyaasi muqtaar maxamed cali ayaa sidoo kale tibaaxay in ay ceeb ku tahay in haatan ay dhac u geysato shacabka soomaaliyeed maadama shacabkii soo dortay ay kula kaceyso falal ka baxsan dowladd wanaaga.
Sidoo siyaasiga ayaa madaxda dowladda kaga digay in shaarka dowladda ku dhacaan hantida umada soomaaliyeed sidaasna laga wanaagsanyahay.
Sikastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya hogaankeeda ayaa lagu yaqaanaa dhaca iyo ku tagri falka awoodeed ee ay u geysaneyso shacabka soomaaliyeed.
Mudane ha niyad jabin shacabkaaga hana u xiran dhaca umada soomaaliyeed shaarda dowladda
Previous articleMaxaadna Ogeeyn oo ka socdo Gobolka Banaadir
Next articleWadooyinka muhiimka ah ee Magaalada Muqdisho oo maanta xiran
Hogaankii Qaaqlayaasha oo aamusan, Xildhibaan Zakariye Xaaji?